Jaadka Somaliland iyo Puntland: Maxay tahay sababta ay u fasaxeen ganacsigiisa iyo cuniddiisa?
Tuesday May 19, 2020 - 12:57:24 in Wararka by Burco Staf
Puntland waxay dib u furtay ka ganacsiga jaadka kaas oo dowladda federaalka ee Soomaaliya ay mamnuucday si looga hortago faafidda cudurka korona oo qeybo ka mid ah Puntland laga helay.
Wasaaradda caafimaadka ee maamulkaas ayaa sheegtay in ay ku adkaatay fulinta xayiraadda jaadka maadaama uu u fasax u yahay shacabka Itoobiya iyo qeybo ka mid ah Soomaaliya. Balse dadka qaar ayaa su'aal geliyay sababta xilligan loo fasaxay iyadoo weli uu cudurka faafayo.
Wasiirka caafimaadka Puntland, Jamac Faarax Xasan ayaa BBC-da u sheegay in markii ay dib u eegis ku sameeyeen go'aanka lagu joojiyay jaadka ay farsamo ahaan macquul aheyn sidaas darteedna ay fasaxeen.
"Markii aan dib u eegis ku sameynay waxaa inoo muuqatay in farsamo ahaan wixii aanay macquul aheyn in meel saas u furan oo xudduuha iska furan yihiin in si wax ku ool ah loo joojin karo... khrashka ku baxaya la dagaallanka jaadka waxaa inooga fiican in aan u leexinno meelaha wacyigelinta iyo daweynta iyo ka hortagga," ayuu yiri wasiirka caafimaadka Puntland, Jamac Faarax Xasan.
Wuxuu sidoo kale sheegay in jaadka uu si sharci darro ah ku soo galo Puntland iyo "In ay adag tahay in la xakameeyo jaadka maadama uu sidaas hareeraha oo dhan u furan yahay."
Wuxuu sidoo kale ka dhawaajiyay in dib u eegis ay ku sameyn doonaan go'aanka lagu fasaxay jaadka.
Dhanka kale, guddiga ka hortagga cudurka Korona ee Jamhuuriyadda iskeed ugu dhawaaqday madaxbanaanida ee Somaliland ayaa shaacisay in la fasaxay ganacsiga jaadka ee halkaas.
Waxaa Deegaannada Somaliland laga mamnuucay jaadka maalmo ka hor inteysan billaaban bisha Ramadaan, waxaana go'aanka lagu joojiyay jaadka ka dhashay in la xiro dad badan halka xukuumadda ay la wareegtay baabuur lagu eedeeyay inay sideen.
Waxay guddiga taa baddalkeeda u jeediyeen talooyin ganacsatada jaadka si looga hortaggo xannuunka coronavirus, waxaana ka mid ah qodobadaas.
In meheradaha lagu iibiyo jaadka ay dhaqan geliyaan kala fogaanshaha bulshada
In dadka ku howlan ka ganacsiga jaadka ay afka iyo sanka xirtaan
In meheradaha jaadka la dhigo dareeraha jeermiska dila
In shirkadaha ka shaqeeya jaadka ay xumada ama qandho ka baaraan shaqaalahooda
Dareenka ka dhashay fasaxa Jaadka Somaliland
Qaar ka mid ah dadka muqayiliinta iyo kuwa ka ganacsada jaadka ee deegaannada Jamhuuriyadda iskeed ugu dhawaaqday madaxbanaanida ee Somaliland, waxa ay si aad ah ugu riyaaqeen in dowladda ay dib u furto jaadka oo hakad ku jiray muddo toddobaadyo ah.
Weriyaha BBC-da ee Hargeysa oo booqday qaar ka mid ah meheradaha lagu iibiyo jaadka wuxuu sheegay in afurka kaddib ay halkaas isugu tageen dad badan oo u kala dheerenaya sidii ay u iibsan lahaayeen jaadka maadama loo faxasay.
Korona fayras: Mamnuucidda Jaadka oo siyaabo kala duwan looga fal celiyay
Axmed Cabdirashiid ayaa BBC u sheegay in markii uu af-furay uu u jiheystay goobta lagu gado jaadka maadama uusan cunin in muddo ah.
"Shan iyo labaatanka cisha wax ka darnaa mey jirin... bahalku xoriyaddu ku fiican yahay balse iska sug inta la fasaxay, marka uu caawa soo dhaceyba, waa anigaa ugu soo horqaatay, cashadii waan ilaaway".
Somaliland oo la wareegtay baabuur la sheegay inay sideen qaad sharci darro ah
Canab Jaamac oo ka ganacsatada ayaa sheegtay in go'aanka lagu mamnuucay jaadka uu ahaa mid lagu degdegay oo aanan dan ugu jirin dadka dan yarta ah ee ku howlahan ganacsiga.
"Go'aan lagu degdegay oo aad iyo aad anaga noloshii nagu adkeyay buu ahaa, marka caafimaadka oo kale la eegayo waxaa weeyaan in lala tashado bulshada... aadbaan ugu faraxsanahay noloshiisa".
Samatar Faarax Meygaag oo horey uga ka mid ahaa muqayiliinta ayaa sheegay in uu ka faa'ideystay muddadii jaadka la joojiyay isla markaana hadda uu iska dhaafay.
"Jaadkas soo noqday ummadda dhib ayuu u geysanayaa, aniga koley isma lihi aad ku noqotid, danaheygii ayaan ku foofay qoyseygii, reerkeygii, nafteydii... marka faa'ido badan baan ka helay, joojintiisa" ayuu yir Samatar.